Halatra avo lenta :: Karohina ny masera sandoka roa vavy niaraka tamin'ny mpisoloky ho mompera • AoRaha
Fanararaotana sy halatra. Tra-tehaka, teny Analakely, afak’omaly, ny lehilahy iray voatondro ho nangalatra vary mitentim-bidy roapolo tapitrisa ariary tamin’ny alalan’ny fisandohana ho mompera. Voasambotra ihany koa ireo olona niray tsikombakomba taminy sy nandray ny entana halatra. Mbola karohina ny vehivavy roa, izay fantatra fa nisandoka ho masera, samy voarohirohy niaraka nanao ny asa ratsy.
Tamin’ny fotoana ankatoky ny fahatongavan’ny Papa Fransoa teto amintsika no nanararaotan’ireto mpisoloky nanaovana ny asa ratsy. Tonga nanatona teny amin’ny polisin’ny SUT (Sureté Urbaine de Tana) eo anivon’ny Kaomisarian’ny polisy foibe, etsy Tsaralalàna ny lehilahy iray mpivarotra vary ambongadiny, tamin’ny 17 aogositra lasa teo, nitaraina fa voasolokin’ny mompera sandoka. Nambarany fa nisy lehilahy nanao fanamiana mompera sy vehivavy roa nanao fanamiana masera tonga tao amin’ny fivarotany.
«Nilaza tamin’ilay mpivarotra ireo mitonona ho relijiozy fa mitady vary maro hovidiana maika mba hamahanana ireo vahiny maro avy any amin’ny faritra, mandritra ny fandalovan’ny Papa. Vita ny adivarotra ka vary dimpampolo sy roanjato gony no hovidiana», araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny polisy.
Tetika maty paika
Nafatratra tao anatina kamiao iray ny vary. Ireo masera roa no nitondra izany. Niaraka tamin’ny mpivarotra haka ny vola kosa ilay mompera. Teny Faravohitra no hakana ny vola vidin’ny vary. «Nasaina niandry teo amin’ny vavahady lehibe iray ilay mpivarotra. Nilaza ny haka vola ao amin’ny lehibeny kosa ity mpividy. Tamin’izany indrindra no nanararaotany nandositra. Tsy hita popoka izy sy ny namany roa vavy nanomboka teo », hoy ny Kaomisera Pemba James Pizarre, lehiben’ny polisin’ny SUT.
Niroso tamin’ny fanadihadiana sy ny fikarohana ny polisin’ny SUT. Nisy ny fiaraha-miasa teo amin’ny tambajotram-pifandraisana. Voasambotra ilay mompera. «Voamarina fa mompera sandoka io lehilahy io. Tsy masera ihany koa ireo roa vavy. Niaiky ny fiampangana azy ity voasambotra. Fantatra fa misy raharaha fisolokiana ihany koa eto aminay mahavoarohirohy azy », hoy ihany ny Kaomisera Pemba James Pizarre.
Lozam-pifamoivoizana :: Fiara telo tra-doza tany Antsirabe